[Review – Tóm tắt] Xin Chào, Ngày Xưa Ấy – Bát Nguyệt Trường An | Anybook.vn - Anybook
[Review – Tóm tắt] Xin Chào, Ngày Xưa Ấy – Bát Nguyệt Trường An | Anybook.vn
Raha tianao ny karazana tanora zaridaina an-tsekoly, dia tsy anarana hafahafa ny anarana Bat Nguyet Truong An, marina! Ity asa ity no asa voalohany tao amin’ny lisitry ny sekoly ambony Chan Hoa, anisan’izany ny: “Manahoana, tamin’ny andro taloha”, “In love: Quat Sinh Hoai Nam”, “Ny tsara indrindra amintsika” (asa 3 rehetra) Ireo rehetra ireo dia manana nadika) ary ny asa hoe “Taona maro izay no lasa” (anarana vietnamiana: eo ambanin’ny andohalambo fahatsiarovana) dia eo am-pandikana amin’izao fotoana izao.
Tany amin’ny tapany voalohany amin’ny asa dia nilentika tao anatin’ny fahatsiarovana ny fahazazana aho, niova ho olona amin’ny tantara sy sariitatra. Rehefa dinihina tokoa, dia tena mafy, fa nanome anay ny fomba fijery akaiky indrindra momba ny asa, ny mahery fo, ny fahazazany ary koa ny tenako. Hita mazava tsara ny toetran’ilay mpilalao vavy Yu Chau Chau, indrindra ny toetra anaty ao anatin’ilay toetra, dia tombon-dahiny izany satria ny tantara dia manomboka rehefa i Chau Chau dia tovovavy tia mody ho mahery fo hamonjy. . Miaraka amin’ny fijeriny intuitive amin’ny olona rehetra manodidina azy, dia tsy misy ny tantaram-pitiavana eo amin’izy roa.
Raha ny hevitro dia tovovavy manan-talenta, be herim-po, mendri-piderana, malemy fanahy, mafy loha i Yu Chau Chau. Ny vinan’i Chau Chau dia ny dingan’ny fitomboana sy ny fihaonany amin’ny namana tsara, fa tsy maintsy mandalo ny zava-dratsy sy ny zavatra mampalahelo ihany koa. Miankina amin’ny fihetseham-pon’ny tsirairay no hafa ny sarin’i Du Chau Chau, mamaky sy mizara izany amiko ny tsirairay. Na izany aza, ny tena zava-dehibe amin’ny asa dia ny fizotry ny tantara indraindray dia tsy mirindra, ka sarotra ho an’ny mpamaky ny mahatakatra, tsy afaka manaraka ny gadon’ny tantara. Toko vitsivitsy monja amin’ny tapany voalohany izany, tsy dia lava loatra ny tantara, ka ny tsirairay dia manohy mijery ny tapany manaraka mba hahafantarana bebe kokoa momba ny fiainan’i Chau Chau miaraka amin’ny eritreriny sy ny eritreriny amin’ny ho avy!
Manaraka izany dia i Tran An, maro aminareo no diso hevitra fa ity no lohatenin’ny lehilahy ity noho ity fehezanteny ity: “Nandalo ny lalana lava indrindra teo amin’ny fiainany i Du Chau Chau tamin’io taona io, saingy nifankahita tamin’i Tran An izy tamin’ny faran’io lalana io. “, feno fitiavana ny fampidirana. Na ny fomba fanoratra ny mpanoratra aza indraindray dia mampisafotofoto ny mpamaky. Amiko, rahalahy azo itokisana sy matotra i Tran An, karazana tovolahy tsara kokoa noho ilay rahalahy faharoa amin’ny sarimihetsika Koreana. Tsy maintsy misaotra an’i Tran An aho noho ny nisehoany teo amin’ny fiainan’i Chau Chau, amin’ny maha-olona azo itokisana azy, mba hahafahany mizara ny eritreriny sy ny faniriany, hahatakatra an’i Yu Chau mba tsy hahatsapany ho tsy mahazo aina. Raha ny marimarina kokoa dia i Tran An no atokisan’i Chau Chau.
Tada izao no mpitarika lehilahy: Lam Duong. Amin’ny maha-lehilahy azy, ny bika aman’endriny dia kely, mahonena! Na izany aza, mbola tiako kokoa i Lam Duong noho i Tran An, ao amin’i Lam Duong dia misy tanora tsy manan-tsiny, lehilahy tokony hiaraka aminao amin’ny fahatanoranao, tiako ny tsy miovaova, toy ny fahatsarana, ny fihetseham-pony, ary ny fitiavany an’i Yu Chau. Tsy hoe i Tran An no tsy tena tsara, na inona na inona, fa ny fahanterana ao amin’ny fisainan’i Tran An dia tsy tiako, Tran An no mety kokoa amin’ny rahalahy izay ankafiziko sy itokiako. Raha ny amiko, hitako fa mety kokoa amin’i Chau Chau i Lam Duong, noho ny antony maro kokoa. Raha te hahalala ianao dia vakio ary zarao eto.
Ireny olona mpanohana mahatehotia ireny, manomboka amin’ny namany fahazaza Bon Bon, ka hatramin’ny namana kilasy voalohany Tieu Yen Tu, na mpiara-mianatra amin’ny sekoly ambaratonga faharoa sy ambony, dia voatonona avokoa amin’ny endriny sy ny toetrany. dia tsy maintsy miatrika ny nenina amin’ny fisarahana amin’ny namana mba ho any amin’ny hoavy lavitra.
Raha fintinina, ity dia asa tokony hitsambikinao, noho ianao tia an’ity karazana ity, na ho fialamboly, miaraka amin’ny peninan’ny mpanoratra amin’ny diany iray mihalehibe miaraka amin’i Chau Chau sy ny namany!
Miaraka amin’i Chan Hoa sy Quat Sinh Hoai Nam, ny zavatra tsara indrindra momba ny tanora, Hello io andro taloha io dia mitondra fofon’aina vaovao ho an’ny tanora, Bat Nguyet Truong sahy fomba iray, malefaka nefa tony lalina ary somary manenina.
Toy ny andian-dahatsoratra hafa, Hello taloha dia toy ny diary mampiseho ny fiainana sy ny nitomboan’ilay vehivavy mpitarika Yu Chau Chau. Raha nanantena ianao fa ho tantaran’olona roa fotsiny ity, tsia, tsy izany. Raha antenainao ho tantaram-pitiavana mahery vaika ity? Dia tsy natao ho anao ity asa ity. Nahoana? Satria tantara iray mihodinkodina amin’ny mahery fo hatrany amin’ny fahazazana ka hatramin’ny fahazazany ity tantara ity, dia aseho avy amin’ny fihetseham-pony avokoa ireo olona manodidina azy.
Miarahaba an’io andro io dia manomboka amin’ny seho iray ahitana an’i Yuzhou Chau, 6 taona, ao anatin’ny tontolon’ny nofinofy izay ilalaovany ny toeran’ny mahery fo hamonjy izao tontolo izao. Avy eo dia arahin’ny andro nitombo tsikelikely. Misy ny alahelo, misy ny fanaintainana, fa misy fahatsiarovana maro. Indray mandeha io zazavavy 6 taona io dia nitomany satria tsy azony ny pinyin, satria tsy nisy voninkazo valisoa izay namirapiratra tamin’ny faha-17 taonany.
Tena anjely tokoa i Yu Chau Chau. Tsara fanahy, be fitiavana ary manan-tsaina. Tsara fanahy nefa tsy dia malemy fanahy, mafy loha fotsiny. Toa matotra kokoa noho ny taonany i Chau Chau. Hatramin’ny sekoly ambaratonga faharoa, rehefa nahazo vokatra ambony tamin’ny fianarany izy ary tao amin’ny 5 ambony foana tamin’ny kilasiny, dia nieritreritra i Yu Chau Chau hoe: tsara vintana ve aho? Mora loatra angamba ny fanadinana? Miezaka milaza ianao, tovovavy 12 13 taona, voalohany tao amin’ny kilasiny, na dia mbola mahatsiaro ho faly sy mirehareha aza, fa matahotra foana fa satria ny andriamanitry ny vintana no nikarakara azy. Izany no antony?
Eo am-pitomboan’i Yu Chau Chau dia misy namana tena mahafinaritra foana. Ny namana sasany dia milaza fa i Chau Chau dia tsara vintana hihaona amin’i Lam Duong, Bon Bon, na Me Kieu. Ataoko angamba fa tsy izany. Io tovovavy io, mendrika ny zavatra tsara toy izany.
Tena mahafatifaty tokoa i Lam Duong mpitarika anay. Tena mahafatifaty loatra. Araka ny efa nolazaiko teo aloha anefa dia tsy tantara ho an’olona roa ity ka somary kely ny tanin’ny mpilalao sarimihetsika. Fa matokia, kely izany kalitao izany. N’aiza n’aiza isehoan’ny lohan’ny lahy, dia eo izy no mamirapiratra. Satria tena mahafatifaty ny loham-pianakaviana, na dia mangatsiaka aza ianao. Zavatra iray hafa tokony holazaina, toa i Lam Duong no toetran’ny lehilahy mpanohana mahazatra amin’ny endriky ny lehilahy. Ny famadihana ny tantara ho amin’ny sarimihetsika, hatramin’ny fahazazana ka hatramin’ny lehibe. Fony aho mbola kely, dia nampijalin’i Chau Chau aho. Rehefa lehibe izy ireo dia sarona ambony sy ambany. Saingy toa nanana fiainana vaditsindrano hatrany amin’ny fahazazana ka hatramin’ny fahazazany ilay namantsika Lam Duong. Na ahoana na ahoana dia voadaroka izy dia mbola mifikitra amin’ny mpitarika vehivavy :v Adino ny milaza fa Lam Duong dia lehilahy tena mahay sy tsy miovaova. Indray mandeha izy dia nilaza tamin’ny reniny fa ny safidiny dia handray ny andraikiny. Ary Yu Chau Chau izany safidy izany. Rehefa manana olona tianao harovana ianao, dia lasa matanjaka kokoa ianao. Lam Duong, indray mandeha dia niteny tamim-pitsikiana hoe: “Izahay sy Chau dia efa nifankahalala hatramin’ny sekoly ambaratonga faharoa, raha te ho lavo amin’i Chau Chau aho dia efa nanao izany hatry ny ela. Te hiaro azy fotsiny aho.”
Tsy misy telozoro fitiavana ilay tantara, na dia heveriko fa vitsy ny olona manantena fa ho lehilahy faharoa ao amin’ny angano LOL i Tran An. Satria tena nampiditra an’i Tran An tamin’ny fehezanteny feno fahasahiana sy tantaram-pitiavana ny mpanoratra:
“Tamin’io taona io, nandalo ny lalana lava indrindra teo amin’ny fiainany i Yu Chau Chau, saingy nifanena tamin’i Tran An teo amin’ny faran’io lalana io izy.”
Saingy mihoatra ny iray segondra lahy amin’ny sarimihetsika Koreana, Tran An dia toy ny olona matoky tena, izay ahafahan’i Chau Chau mizara tsara ny eritreriny taloha, indraindray tsy voafehy. Ary soa ihany fa toa nanana fahaizana nahatakatra azy foana izy. Indraindray aho manontany tena raha tamin’ny andro nihalehibe i Chau Chau – nahatsiaro ho manirery foana ilay tovovavy, noho ny eritreriny manokana, noho ny fahazarana manandratra ny tenany hijery ny mpiara-mianatra aminy – raha tsy misy azy.
Ireo endri-tsoratra mpanohana hafa, avy amin’ny zazalahy Bon Bon – namana fahazazana, ilay zazavavy kely Tieu Yen Tu any amin’ny sekoly ambaratonga fototra ka hatramin’ny namana amin’ny sekoly ambaratonga faharoa dia voalaza fa tena feno fahasahiana amin’ny fahasamihafan’ny toetrany, afa-tsy ny sary na ny toe-javatra iainan’ny fianakaviana dia hahatonga ny olona hiroboka amin’ny tenany. isaky ny vanim-potoana ao amin’ny tantara. Satria ny tantara, araka ny nolazaiko tany am-boalohany, dia dingana miandalana amin’ny fampitomboana an’i Chau Chau, izay ahitanao ny nenina tamin’ny fisarahana tamin’ny namana ho any amin’ny toerana “lavitra kokoa”.
Namboarina ho sarimihetsika ilay tantara, na dia tsy mampita ny votoatin’ny tantara rehetra aza, dia mbola tena tsara. Mampalahelo fa tsy nanararaotra tanteraka ny votoaty tamin’ny fahatanorany i Chau Chau, fa tamberina kely fotsiny satria hitako fa ampahany manan-danja amin’ny tantara izany. Nanao asa tsara i Ly Lan Di sy Truong Tan Thanh nilalao ny anjara asan’i Yu Chau Chau sy Lam Duong. Ny tsikitsiky ny mpitarika lehilahy ao amin’ny sarimihetsika dia tena talaky masoandro ary somary very hevitra ihany koa. Sarimihetsika mendrika hojerena io, fa tsy natao ho anao izay maimaika loatra, fa mila mahatsapa tsikelikely.
– Nguyen Thi Chung
Momba an’i Yu Chau Chau, hatramin’ny faha-4 taonany ny tantara. Chau Chau eo imason’izao tontolo izao dia ‘zazalahy’, zaza teraka tsy manan-dray. Raha apetrakao ao anatin’ny tontolon’ny tantara ilay izy, dia mety ho teraka tany amin’ny taona 87 tany ho any i Chau Chau. Tamin’izany fotoana izany, fony izy bevohoka tsy nanambady, dia niaina teo anatrehan’ny fanesoana sy fanesoana ary ozon’olona, ​​angamba ny 8x-taranaka- 9x azo.
READ Thông tin về ngành Kỹ thuật Môi trường (Công nghệ kỹ thuật môi trường) | Anybook.vn
Saingy tsy ny renin’i Chau Chau no olona fahatelo. Ny rain’i Chau Chau no namadika an’io vehivavy io mba hanambady – hanambady vehivavy mpanankarena. Teraka i Chau Chau satria fantatry ny reniny fa bevohoka tara loatra izy, tsy afaka nilavo lefona, na tsy te hilavo lefona.
Noho ny zava-misy dia takatr’i Chau Chau manokana. Mahatakatra hatramin’ny fahazazana, mahatakatra hatramin’ny hahatonga ny hafa handratra sy handatsa-dranomaso. Tsy mahazo mandeha any amin’ny akanin-jaza i Chau Chau satria tsy manam-bola. Matetika i Chau Chau no milalao irery, ary matetika mitantara sy miara-miasa amin’i Bon Bon – zazalahy tsy manan-dreniny, mpisotro toaka ny rainy, na nodarohan’ny rainy rehefa mamo.
Manana ‘aretin’ny’ malefaka i Chau Chau, na maka sary an-tsaina ny tenany ho mahery fo lehibe, niova ho mpilalao virtoaly mba hilalao ny lalaony manokana, izay misy ny tsara mandresy ny ratsy, fiafarana mahafaly foana. .
Nihaona voalohany tamin’i Lam Duong i Chau Chau rehefa niditra an-tsokosoko tao amin’ny akanin-jazan’ny governemantam-paritany. Lam Duong dia mitovy amin’ny Bon Bon, fa tsy mitovy. Tsy toy ny hoe aiza i Chau Chau no tsy mahalala intsony, fa i Lam Duong no tsy mankahala azy, mitady azy hilalaovana foana.
Ny fiainana dia mitohy miaraka amin’ny fahadisoan’ny olon-dehibe, miaraka amin’ny tsaho maneso, miaraka amin’ny zava-misy tena misy: Raha tianao hokarakarain’ny mpampianatra ny zanakao, dia tsy maintsy manome fanomezana ho an’ny mpampianatra ianao, mandrara ny ankizy milalao aminy. ankasitrahana, ary diso foana ny mpianatra mahantra.
Lam Duong no masoandro mafana tamin’ny taona voalohany tao amin’ny sekoly fanabeazana fototra an’i Chau Chau. Saingy ny tontolo dia nahatonga azy ho matotra sy hahatakatra bebe kokoa.
READ Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn | Anybook.vn
“Tsy tsaroany hoe hafiriana no tsy nanaovany ‘brocade landy’ mba hilalaovana ny toeran’ny andriambavy na andriambavy ao amin’ilay efitrano kely. Yu Chau Chau dia nivadika ho anjara amin’ny anjara.
Tsy tantara rosy fotsiny ny tantara. Nanomboka nanao sarin’ny zazavavy kely iray izay nandalo fijaliana be izy, ary nanao sary vehivavy tompo iray izay tsy azon’ny olona rehetra fa nankahala ny ho faty… Toy ny andriamani-bavin’ny anjara i Yu Chau Chau, saingy tsy toy ny taloha intsony izy. .
Ireo fotoana mangina ireo dia vita pirinty amin’ny taratasy avokoa. Ataon’olon-kafa ilay zaza, ka hamitaka ny hafa.
Angamba ny fotoana mamiratra ho an’ilay zazakely dia rehefa mody miaraka amin’i Lam Duong izy. Na dia hafahafa be aza i Lam Duong teo amin’ny lampihazo, rehefa niaraka taminy izy, dia nitsiky foana izy ary nisambotra ny volony, nitantara tantara mahaliana taminy, ary niresaka taminy momba ny fitiavana sy ny fankahalana amin’ny sariitatra, Yu Chau Chau. ny fiainan’ny zaza. Na dia filentehan’ny masoandro fotsiny aza izany.”
Tsy dia miseho firy i Lam Duong, fa isaky ny miseho izy dia toa miposaka ny masoandro mafana amin’ny andro ririnina, soa ihany fa manana Lam Duong i Chau Chau. Saingy, tsy naharitra ela io fisakaizana kely io satria nandrara an’i Duong tsy hilalao amin’i Chau ny renin’i Duong. Vao niara-nilalao nandritra ny herintaona i Chau dia nifindra tany amin’ny sekoly ambaratonga faharoa.
Ny sarin’ny zazalahy roa ambin’ny folo sy telo ambin’ny folo taona mitana baoritra misy sôkôla nentina niverina avy any Frantsa, nitsangana teo anoloan’ny biraon’ny bulletin mijery tsara ny lisitry ny kilasy satria tsy tanteraka ny fampanantenan’i Chau Chau hiara-mianatra, fa nipoaka. latsa-dranomaso. Tena mampalahelo ilay zazalahy, toa an’i Guizhou, fa ny mifanakaiky kokoa dia tsy mifanalavitra.
READ [Cập nhật] Cấu trúc đề thi đại học môn Lý chi tiết, đầy đủ nhất | Anybook.vn
Ny ambaratonga faharoa dia ny fahamatorana sy ny fiovan’i Chau Chau. Ho any amin’ny tontolo izay tsy misy mahalala hoe iza izy ireo no hiezaka.
Tany amin’ny lisea, nihaona tamin’i Lam Duong indray i Chau Chau tao Chan Hoa,…..
Previous: 1001 bài thơ buông bỏ để an lạc & hạnh phúc trong cuộc sống | Anybook.vn
Next: Phân quyền là gì? Một số mô hình phân quyền phổ biến | Anybook.vn